TRF emshinini 2016 | Amaphephandaba amaReward Foundation kanye ne-intanethi
Ikhaya TRF ku-Press 2016
Abezindaba bathole i-The Reward Foundation futhi basakaza izwi ngomsebenzi wethu kubandakanya: amakilasi okuqwashisa izingane; ukubiza ngomsebenzi osebenza kahle, ubucholi obusekelwe ebuchosheni kuzo zonke izikole; isidingo sokuqeqesha abahlinzeki bezempilo be-NHS ekubhebhekeni kocansi kanye nomnikelo wethu ucwaningo ekuhlukunyezweni ngokocansi okubangelwa ucansi. Leli khasi liqhakambisa ezinye zezimpumelelo zethu emaphephandabeni.
Okthoba 2016. UMary Sharpe ufaka kulokhu kuphawula okwenziwe nguDkt Linda Hatch mayelana nokulutha kocansi nocansi e-UK.
ISunday Times - Edition yaseScotland, ngomhlaka 21 Agasti 2016
I-version esetshenziswa ngaphandle kweScotland ingabonakala ku-intanethi lapha. Kudinga ukubhalisa, noma ngabe ungabhalisela izindaba ezimbili zamahhala ngesonto. Iphinde yasetshenziswa kule ndaba yezindaba zolimi lwesiCroatia ngaphansi kwesihloko NAVUČENI NA PORNIĆE Djeca od 11 unina ovisna su o nasilnom seksu ebhalwe ngu-Ana Muhar.
I-Daily Mail yaseScotland ilandelele indaba yeThe Times kabili. Okokuqala kunikeze ucezu olulandelayo…
Ngakusasa isebenzise imibono eminingi yomklomelo womvuzo kumholi wayo…
Abafundi kwesinye sezikole ezizimele ezizimele kakhulu zeCommunity bahlelwe ukuba bathole "amakilasi okuqwashisa ngocansi" phakathi kwezimo zokulutha umlutha.
I-Fettes College, ebiza uNgqongqoshe wezeMfundo uNdunankulu Tony Blair phakathi kwama-alumni ayo, umeme umculi we-intanethi ukuhlangana nabafundi kamuva kulo nyaka.
Kuza ngemuva kokucwaninga komzimba okukhulayo okuhlanganisa ukuvezwa kwezingubo ezingcolile okuqhubeka isikhathi eside nokuwohloka kwempilo yengqondo nokungabi namandla.
Kukhona futhi izimangalo zokuthi umlutha ungalimaza izifundo, amathemba emisebenzi kanye nobuhlobo, ngezinye izixwayiso ezingase zenyuke ekubukeni izithombe ezingekho emthethweni zokuhlukumeza izingane.
UMary Sharpe, ummeli kanye nomsunguli we-The Reward Foundation, isenzo esiwusizo esikhuthaza ubudlelwane obuhle, sesinikeze amakilasi okuqwashisa ama-porn kuGeorge Heriot ne-Dollar Academy eSigrling.
Umthombo oseduze nesinye sezikole uthe lezi zinsuku "zinobudlova futhi ziqondile" ngemiphumela yokulutha kwezidakamizwa, kanti omunye umthombo uchaza ngokuthi "uyathandeka futhi uyigugu".
Futhi le ndlela iye yaba usizo kakhulu ukuthi ama-Fettes - aphethe imali ye £ 32,200 ngonyaka - anqume ukuwamukela.
U-Sharpe uthe umemezelwe ukuletha iklasi ngokuhamba kwesikhathi kulo nyaka. "Lezi zikole ziqaphela ukuthi imiphumela engcolile yobulili engcolile ingaba ngabafundi babo, ngokuphathelene nempilo yabo yengqondo kanye nokufunda kwabo," wanezela u-Sharpe.
Isisekelo sakhe senze imininingwane yezinkulungwane zamacala ezinsizwa ezisuka eBrithani nakwamanye amazwe eziye zakhuluma ngomphumela wokulimaza kwabo.
Ngokufanayo nokuthatha izidakamizwa, u-Sharpe uye waxwayisa ukuthi amazinga okubekezelelana kwezidakamizwa ezingcolile zobulili ayenyuka ngokuqhubeka nokuvezwa okuqhubekayo nokuthi umkhuba wabo ungaqhubeka, nabasebenzisi abafuna izinto ezibonakalayo ezibonakalayo ukuze ziwanelise.
"Izinsizwa zingasheshe zikhuphuke ezithombeni ezingcolile zobulili ezingcolile, ezithombeni ezingcolile zobulili ezingcolile, ezithombeni zobulili ezingcolile kanye nezingane ezingcolile, ukuze zithole isidingo salolo daba," esho.
UCameron Wyllie, oyinhloko kaGeorge Heriot, wathi: "Kubaluleke ngempela ukuthi abantu abasha bavelele engozini engaba khona yokubukela izithombe zobulili ezingcolile ngezifundo zesayensi ezibonakala zibonisa ukuthi ukusetshenziswa ngokweqile kwezithombe zobulili ezingcolile kulimaza ngokwengqondo nangokwengqondo.
"Ubufakazi buyakhula ukuthi ukuvezwa kwezithombe zobulili ezingcolile okungakaze kwenzeke ngenxa ye-intanethi, okutholakala kalula nge-Smartphones kanye namaphilisi, kubiza amadoda asebasha futhi abashiye abakwazi ukuvuswa nomlingani wezocansi."
Ngo-June, i-NHS Lothian ebizwa ngo-Sharpe ukuhlangana nabasebenzi eKliniki yezempilo yezocansi e-Chalmers Street ukuze baqaphele ukungaziphathi kahle kocansi.
Ingalo yase-UK ye-Huffington Post ibhale lokhu okulandelayo indaba ngomhlaka 22 Agasti 2016. siveze umbono omnandi ovela kumfundi wase-USA.
I-Independent yabuye yaqhutshwa kabusha, ikakhulukazi yezindaba ze-Sunday Times, etholakalayo lapha.
Le ndaba nayo yayithathwa kabanzi emithonjeni yamazwe omhlaba, njengasekude kakhulu Vietnam futhi Indonesia.
Usizo olusekelwe ngummeli lushicilela iphepha ngemiphumela emibi yezithombe zobulili ezingcolile
Inhlangano esiza abantulayo esungulwe ngummeli ishicilele iphepha ngemiphumela yokusetshenziswa kocansi kwe-inthanethi okuphoqelela.
UMary Sharpe, ilungu elingelona elisebenzayo le Isikhundla sabameli, umkhuba wokushiya ukusetha Isisekelo Somvuzo, insizakalo ehlose ukuqhubekisela phambili ukuqonda komphakathi ngomjikelezo womjikelezo wobuchopho nokuthi uxhumana kanjani nemvelo kanye nokuthuthukisa impilo ngokuqhubekisela phambili ukuqonda komphakathi ukwakha ukuqina kokucindezeleka.
Kuphepha elisha ngo US Navy odokotela kanye noMnyango Wemivuzo, onesihloko esithi "Ingabe Izithombe Zobulili Ezingcolile Zase-Internet Zibangela Ukuhlukunyezwa Ngokocansi? Ukubuyekezwa nge Imibiko Yomtholampilo", Kuphakanyiswa izindlela zobuchopho okusetshenziswa ngazo i-intanethi ye-intanethi kungabangela ubunzima bezocansi ngisho nababukeli abanempilo. Labo abaqala ukusebenzisa ngesikhathi sokuqakatheka okukhushulelwa kokukhulelwa nokukhula basengozini ikakhulukazi.
Abaphathi abaningana nabameli abanobugebengu abahamba phambili baye babonisa ngokuzethemba ukwesaba kwabo ngenxa yethonya lezithombe zobulili ezingcolile ngokuziphatha kwabantu abasha Izindaba zeScottish Legal.
UNksz Sharpe uthe ucabanga ukuthi ukudlwengulwa kobulili kungase kube "ngokubambisana nokunyuka kokusebenzisa izithombe zocansi".
Wanezela: "Akungabazeki ukuthi ukuhlukunyezwa kwengane yomlando kanye nabantu abaningi abaza phambili ukubika ukuhlukunyezwa ngokocansi kudlala indima njengoba kutholakala kangcono ngamaphoyisa, kodwa ngaphansi kwayo, yonke imilutha yezocansi kanye nokwehliswa kwemiphumela yobuchopho nokudlwengula- ukuguqulwa kobuchopho obuhlobene kufanele kube ukudlala ingxenye futhi.
"Kumele kuthathwe iziphathimandla zobulungiswa bezobugebengu ngokubambisana neziphathimandla zezemfundo nezempilo uma sizobona noma yikuphi ukunciphisa kule ndawo yobugebengu."
Agasti 22, i-2016. Ukuthuthukisa Izikole
Ummeli uMary Sharpe ube sematheni kamuva nje ngemuva kokuvela ukuthi isikole esake saba khona sikaTony Blair sizohlinzeka ngamakilasi “okuqwashisa ngocansi” phakathi kokwesaba ngemiphumela engemihle izinto ezingcolile zobulili ezingaba nazo kubafundi.
I-Fettes College e-Edinburgh, esinye sezikole zikahulumeni ezikhetheke kakhulu e-UK, isimeme uNks Sharpe, umsunguli wenhlangano esiza abantulayo iReward Foundation, ukuba azokhuluma nabafundi lapho ekuqaleni konyaka ozayo.
Futhi manje sekuvele izinhlelo zokuletha amakilasi anjalo lapha emzamweni wokwehlisa abafundi bezithombe zobulili ezingcolile ngokubaxwayisa ngemiphumela engaba khona yokudakwa kwabo.
Ekhuluma neBelfast Telegraph, uDarryl Mead, umyeni kaNks Sharpe nosihlalo weReward Foundation, okhuthaza ubudlelwano obuhle, utshele iBelfast Telegraph ukuthi iNyakatho ye-Ireland ibisohlelweni.
"Mina noMary senza izethulo ngokuhlanganyela ezikoleni futhi sinesifiso esikhulu sokwenza izikhathi zokuqeqesha esifundazweni sonke," kusho uDkt Mead.
“Asikazibeki izikhungo ezithile ngqo, kepha iNyakatho ye-Ireland isohlwini lwethu lwezinto okumele sizenze futhi sikhululekile ukuthi sinikeze amakilasi ezikoleni zamabanga aphansi, amabanga aphezulu kanye nohlelo lolimi.
"Sijabule futhi ngokunikeza abafana namantombazane amaseshini ahlukene ngoba banezimfuneko ezihlukile ngokuqondene nokufunda ngezithombe zocansi."
UNkk Sharpe utshele iNolan Show yeRadio Ulster izolo ukuthi, yize okwamanje bebhekene ikakhulu nabaneminyaka engu-16 no-17 ubudala, bahlose ukuqala ukufundisa izingane onyakeni wazo wokugcina esikoleni samabanga aphansi.
"Ucwaningo lukhombisa ukuthi izingane ezineminyaka yobudala ezijwayelekile ziqala ukufuna izithombe ezinqunu nokunye okunjalo zineminyaka eyishumi," esho.
"Namuhla i-intanethi ibanikeza konke ngokuchofoza igundane noma ngokuswayipha ngomunwe, ngakho-ke uma sifuna ukuvikela ubuchopho bezingane lapho zisengcupheni yokuthambeka kakhulu, kuzofanele sizazise manje."
Ummeli uthe yize “ukubuka izithombe ezingcolile kanye nobunqunu kungeke kulimaze”, kodwa kunengozi yokuthi kube yisango lezinto ezisobala, ezingalimaza.
"Ubuchopho buba nesithukuthezi ngokuthile ngemuva kokukubona amahlandla ambalwa futhi kudinga ubusha futhi kulula kakhulu ukukhuphukela ezithombeni ezingcolile zobulili ezingcolile kanye nodlame olunobudlova nezingane zivuswa yilokho," esho. "Bafunda zonke izinto ezingalungile kwi-intanethi futhi kuyabalimaza."
Ukucindezeleka kanye ne-ADHD (ukunakekelwa kokulahlekelwa kwesifo sengqondo) kwakuyizindaba ezimbili zempilo yengqondo uNksz Sharpe ezihlobene nezithombe zobulili ezingcolile.
Uphinde wakhuluma ngenkinga ekhulayo yokungasebenzi kahle kwe-erectile phakathi kwamadoda aneminyaka engu-20 "ngoba bebelokhu bebuka izithombe zobulili ezingcolile ebusheni babo".
"Bayeke ukujabula ngabalingani babo noma ngokuvuswa kocansi okujwayelekile ngoba ubuchopho babo busetshenziselwa ukuvusa umfutho ku-inthanethi," esho.
"Esikhundleni sokufunda ukuthi ungaxoxa kanjani namantombazane futhi ubambane ngezandla wenze zonke izinyathelo ezijwayelekile, bathola izinto ezimbi kakhulu."
UNgqongqoshe we-DUP uNelson McCausland usamukele lesi sinyathelo sokwenza ukuthi amakilasi atholakale ezinganeni zendawo, wathi "kulungile ukuthi abantu abasha bafundiswe ngobungozi bezithombe zocansi".
"Kunokuqwashisa okukhulu namuhla mayelana nobungozi balezi zinto nokuthi zithinta kanjani ubuchopho bomuntu," esho. "Noma yini esiza abantu abasha ukuthi baphile impilo enempilo futhi bazi ngezingozi ezinjalo yinto enhle."